ဆိုးရှားရဲ့ဗျူဟာအသစ်နဲ့ ရှက်ဖီးလ်ပွဲမတိုင်ခင် မန်ဖန်တွေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၇ချက် – FBV SPORT NEWS
ဒီကနေ့ည ကန်ရမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ ရှက်ဖီးလ် ယူနိုက်တက်နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲမှာ ဆိုလ်းရှား ဗျူဟာအပြောင်းအလဲပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပြီးရှက်ဖီးပွဲမတိုင်ခင်မန်ဖန်တွေသိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကိုပြောပြသွားပါမယ်၊
၁ပုံမှန်အားဖြင့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက် ဒီပွဲစဉ်ဟာ အရမ်းကို လွယ်ကူတဲ့ ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်၊ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာက ရှက်ဖီလ်းအသင်းဟာ ဇယားအောက်ဆုံးက တန်းဇင်းဆုန်ကအသင်းဖြစ်လို့ အရမ်းကို ရုန်းကန်နေရတာပါ။
၂.လက်ရှိမှာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ခြေစွမ်းပိုင်းနဲ့စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိနေတဲ့ အသင်းဖြစ်လို့ ရှက်ဖီးလ်ကို ရင်ဆိုင်ရာမှာလည်း အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်သွားနိုင်မယ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
၃.ရှက်ဖီးလ်အသင်းက ယူနိုက်တက်ကို အဝေးကွင်းက‌နေ ခုခံပိတ်ဆို့တောင့်ခံနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်က ပူပူနွေးနွေး အနေနဲ့ လီဗာပူးကို တစ်ပွဲသရေ တစ်ပွဲ အနိုင်ကစားထားပြီး တိုက်စစ်ပိုင်း ခံစစ်ပိုင်း အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ရှိနေလို့ပါ။ နောက်ရှက်ဖီးဟာ ၂၀၂၀မှာ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့ကိုနိုင်ပြီးနောက် အဝေးကွင်း ၁၅ပွဲထိ အနိုင်မရထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။</p
၄.ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်ဟာ အမ်းမရိတ်မှာ အာဆင်နယ်နဲ့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်လို့ ကစားသမားတစ်ချို့ချန်ကောင်းချန်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။ဒီပွဲမှာ ဆိုလ်းရှားအနေနဲ့ ကစားသမားတစ်ချို့ကို အနားပေးဖို့လိုနေမှာဖြစ်ပြီး အပြောင်းအလဲတစ်ချို့ကို မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ တောင်ပံကစားသမားအာမက်ဒိုင်ယာလိုကိုလည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုဖွယ်ရှိနေပြီး အဓိကကစားသမားတွေကို အပြောင်းအလဲလုပ်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
၅. ယူနိုက်တက်ဟာ ရှက်ဖီးအသင်းကို ရှက်ဖီးကွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အကျော့မှာ ၃-၂နဲ့နိုင်ထားသလို ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ နှစ်ကျော့မှာ တစ်ပွဲနိုင် တစ်ပွဲသရေ ကြုံထားရပါတယ်။သို့သော် ရှက်ဖီးကို ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းက နောက်ကျဂိုးတွေနဲ့ ရက်ဖို့ကယ်လို့ နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ပေါ့လိုက်ရင် ခံသွားရနိုင်ပါတယ်.
ယူနိုက်တက်ဟာ ရာသီအစပိုင်းမှာသာ အိမ်ကွင်းရုန်းကန်နေရပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဝေးကွင်း အိမ်ကွင်း အရမ်းကို ကောင်းနေတဲ့ ပုံစံကို တွေ့ရတာပါ၊ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကလည်း လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာ အလွတ်တည်ကန်ဘောကတစ်ဆင့် ဂိုးသွင်းယူထားသလို မေဆင်ဂရင်းဝုဒ်နဲ့ ရက်ဖို့ကလည်း ဂိုးပေါက်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ လုပ်နိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ယူနိုက်တက်တိုက်စစ်က တကယ့်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိနေပါတယ်။
၆.တစ်ဖက်မှာလည်း ရှက်ဖီးနည်းပြ ခရစ်ဝိုင်ဒါက ဒီနေ့ပွဲမှာ ဂိုးပြတ်မရှုံးအောင်ပဲလိုအပ်တယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက် အဓိကအရေးကြီးတာက အနိုင် ၃မှတ်သာမကပဲ ဂိုးတွေရသလောက်သွင်းဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ Title Raceအတွက် မန်ချက်စတာစီးတီးရော လီဗာပူးရော စပါးရောဟာ ယူနိုက်တက်ထက် ဂိုးကွာခြားချက် ပိုသာထားတဲ့အတွက် ဒီကနေ့ပွဲမှာ ရသလောက်ဂိုးသွင်းပြီး ဂိုးကွာခြားချက်ကို ရသလောက်ကပ်ရပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်တွေအရဆိုရင်တော့ ရှက်ဖီးဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကို ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်တဲ့အတွက် ဆိုလ်းရှားအနေနဲ့ အရံကသစားသမားတွေနဲ့ ပွဲထွက်မယ်ဆိုရင်တောင် အနိုင် ၃မှတ်က သေချာပါတယ်။
၇.ယူနိုက်တက်ဟာ Clean Sheetအများကြီးမရထားပေမယ့် တစ်ပွဲမှာ ပျမ်းမျှဂိုးသွင်းနှုန်း ၂ဂိုးရှိသလို ရှက်ဖီးရဲ့ပေးဂိုးခွင့်ပြုမှုဟာလည်း မြင့်တက်နေတဲ့အတွက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပဲ အနိုင်၃မှတ်ရယူသွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေရောဘယ်လို မြင်လဲမှတ်ချက်တွေ ပေးသွားလို့ရပါတယ်။